ဇင်လင်း | MoeMaKa Burmese News & Media
>Ma Elzi - Sending Hondi to Prison from Western Union
Posts Tagged ‘ ဇင်လင်း ’
ဇင်လင်း – ရွေးကောက်ပွဲ နဲ့ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်
ဇင်လင်း – ရွေးကောက်ပွဲ နဲ့ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၁၅ ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ့်ရက် တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာနေပါပြီ။ နိုဝင်ဘာမှာ အစီအစဉ်အတိုင်း အမှန်တကယ်ကျင်းပနိုင်မယ်ဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲဟာ (၄)လလောက်သာ လိုပါတော့တယ်။...
ဇင်လင်း – လူထုကံကြမ္မာကို လူထုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရေး (မိုးမခ) ဇွန် ၀၉၊ ၂၀၁၅ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲရက်က တနေ့တခြား နီးလာနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုက အခုထိ မရှိသေးဘူး လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိ...
ဇင်လင်း – ဗိုလ်အောင်ကျော်ရဲ့ အခန်းဆက်တိုက်ပွဲ
ဇင်လင်း – ဗိုလ်အောင်ကျော်ရဲ့ အခန်းဆက်တိုက်ပွဲ (မတ်လ ၂၀၁၅၊ လက်ပံတန်းကျောင်းသား အရေးတော်ပုံသို့) (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၅ • လေအဟုန်ထဲမှာ လင်းယုန်အုပ်ကြီးလို လက်သီးဆုပ်များစွာ ပျံဝဲနေတယ်…..။...
ဇင်လင်း = “ရီးစ်ဝီလျံကော်မရှင်” ̏ ပင်လုံညီလာခံ˝ နဲ့ “ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးခွင့်ရရှိရေး” (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၅ ဖေဖေါ်ဝါရီလဟာ မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းရဲ့ ထူးခြားတဲ့ လ ဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။...
ဇင်လင်း – ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၁၄ (သို့မဟုတ်) မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအနှုတ်လက္ခဏာပြတဲ့နှစ် (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၄ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ကုန်ဆုံးခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့ အောင်မြင်စွာ နိဂုံးသတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ နှစ်တနှစ်...
ဇင်လင်း – ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး၊ ရွေးကောက်ပွဲစနစ် ပြောင်းလဲရေး နဲ့ “ငို့ဘ” လွှတ်တော် အမတ်များအရေး
ဇင်လင်း – ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး၊ ရွေးကောက်ပွဲစနစ် ပြောင်းလဲရေး နဲ့ “ငို့ဘ” လွှတ်တော် အမတ်များအရေး (ဒီလှိုင်း ဂျာနယ်) နိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၄ ယနေ့မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဘယ်လဲ၊ ဘာလဲလို့ မေးရမယ့်...
ဇင်လင်း – ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ နဲ့ အပစ်ရပ်ရန် ငြင်းဆန်နေသူများ (ဒီလှိုင်း) အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၄ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိနိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအခြေအနေဟာ ရှေ့တိုးနေသယောင်နဲ့ နောက်ပြန်ဆုတ်နေပြီလားလို့ ထင်စရာ အဖြစ်အပျက်တွေ ပေါ်ပေါက်နေတာ တွေ့လာရပါတယ်။ အဓိကဖြစ်စဉ်တွေက...
ဇင်လင်း – ပြည်တွင်းငြိမ်ချမ်းရေး နဲ့ သစ္စာ သမာဓိ သတ္တိ ရှိရေး (ဒီလှိုင်း) အောက်တိုဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၄ ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတို့ အလိုလား အတောင့်တဆုံး ဆန္ဒကို...
ဇင်လင်း – အစိုးရရဲ့တရားစီရင်ရေး – နိုင်ငံသားကို ကာကွယ်ဖို့လား၊ ဖိနှိပ်ဖို့လား? အောက်တိုဘာ ၆၊ ၂၀၁၄ photo ; www.globalpost.com ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလအတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကို ကြားသိရတာ...
ဇင်လင်း – ဦးသိန်းစိန် နောက်တကြိမ် သမ္မတလုပ်ချင်သေးသလား? စက်တင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၄ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာလေ၊ အာဏာလက်ဝယ်ရှိသူတို့ရဲ့ ကစားကွက်တွေကလည်း ပိုပြီး စိပ်လာလေလေပါပဲ။ အာဏာရပါတီနဲ့...
ဇင်လင်း – ထွန်တုံးတိုက်ပွဲ လယ်သမားလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး စက်တင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၄ Photo Bangkokpost ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ သက်တမ်း သုံးနှစ်ခွဲကျော်ကာလ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အခြေအနေ တိုးတက်နေသလား။ ဆုတ်ယုတ်နေ သလား။...
ဇင်လင်း – ဦးဥတ္တမထုံးကို နှလုံးမူကြစို့ … စက်တင်ဘာ ၉၊ ၂၀၁၄ ဤစက်တင်ဘာလသည် မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုအား နိုင်ငံရေး နား၊ မျက်စိ အဦးဆုံး ဖွင့်ပေးခဲ့သော ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ အထိမ်းအမှတ်...
ဇင်လင်း – ငြိမ်းချမ်းရေးခရီး….နီးသလား…….ဝေးသလား သြဂုတ် ၂၇၊ ၂၀၁၄ မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးဟာ အမြင်အားဖြင့် နီးသရောင်ရှိပေမယ်၊ တကယ်အောင်မြင်ဖို့ကတော့ ဝေးလိမ့်ဦးမယ်လို့ အကဲခတ် တချို့က ထင်မြင်နေကြပါတယ်။ တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး အဆင့်ကို...
ဇင်လင်း – ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ၊ စနစ်နှစ်ရပ် ပဋိပက္ခ နှင့် လူထုခေါင်းဆောင် သြဂုတ် ၁၉၊ ၂၀၁၄ သမိုင်းဝင် ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်ပွားခဲ့သည်မှာ ယခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် (၂၆)နှစ်ပြည့်ပေပြီ။ ဤ အရေးတော်ပုံကို မြန်မာ့ မျက်မှောက်သမိုင်း၏...
ဇင်လင်း – ပင်လုံမူ… ရှမ်းမူ …နှင့်… အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး သြဂုတ် ၇၊ ၂၀၁၄ ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံသည် သမိုင်းအကွေ့အချိုးတခုကို ရောက်ရှိနေသည်။ အဘယ်ကြောင့် ယခုကဲ့သို့ သုံးသပ်ရသနည်း။ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ (၂၆)နှစ်မြောက်ပြီဖြစ်သည့်...